Sida lagu Helo YouTube Audio effortlessly
> Resource > YouTube > Sida lagu Helo Audio ka YouTube fudayd
Waxaa jira xoolo ka mid ah ilaha audio on YouTube, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad dhib audio ka YouTube video helo. Tan iyo YouTube ma bixiso qalab dhisay-in, aad u baahan tahay si aad u hesho barnaamijka dhinac saddexaad ah si ay uga caawiyaan. Eeg dheeraad ah lahayn si aad u hesho awood mid here- Streaming taariikhqorihii Audio . Software miiska Tani waxay kaa caawin karaan inaad hesho YouTube audio aan khasaaro tayo leh oo aad u fududahay in la isticmaalo. Aan sii si aad u aragto sida ay u hoos ku shaqaysaa.
1 Ku rakib Streaming Audio Recorder on your computer
Download barnaamijka oo ku xidh on your computer. Waxay leedahay laba nooc sidaa darteed waa in aad ka taxadartaa in la doorto mid ka mid sax ah sida ay nidaamka qalliinka of your computer ah. Labada qeybood oo ku dhowaad shaqeeyaan isku mid, oo sidaas daraaddeed waxaan kaliya ka hadlaan hoos ku version daaqadaha.
2 ka YouTube Hel audio online
Marka aad barnaamijka ka dib markii la rakibey, aad u aragto badhanka weyn Record ee bidixda xagga kore? Riix badhanka oo markaas ha soo tagno si loo helo halka maqal ah YouTube.
Burcad browser ay galaan youtube.com. Markaasuu ku qor in aad fikrad audio iyo raadiyo meesha ugu fiican ee audio. Marka aad ka helaysaan, waxaa furo u ciyaaro. Markaas waxaad arki doontaa barnaamijka isla markiiba ka shaqeeya. Waxa muhiimka ah waa in aad ku leedahay xiriir internet macaan oo aadan joojin ciyaaro meel kasta. Sidaas, waxaad ka heli kartaa file a complete audio leh tayo sare leh.
3 Radidiyaha on kombuyuutarrada gacanta (optional)
Ka dib helitaanka YouTube audio, aad ka ciyaari karaa barnaamijkan. Laakiin inta badan oo idinka mid ah waxaa laga yaabaa xaq u doonayaa inaan u ciyaaro ee qalabka la qaadi karo,? Waa fud. Dooro file maqal ah oo guji badhanka dar Lugood si hoose. Markaas file ku saabsan Lugood muujiyay playlist SAR heli. Markaasay aad u hagaagsan kartaa qalabka aad la qaadi karo sida iPod ama xataa gubi in disc.
Haddii aad rabto in lagu shubaa qalab la qaadan karo sida taleefanka Samsung, waxaad u baahan tahay oo keliya in ay xaq u-riix file maqal ah si ay u helaan meel ay ka yahay doorataa Open ee Folder. Markaas gelin qalabka la qaadi karo ee kombiyuutar iyo file maqal ah gacanta lagu wareejiyo.
Waxa kale oo aad samayn kartaa ringtones in lagu shubaa telefoonka adigoo gujinaya icon jalaska. Haddii aad rabto in aad calaamadiso audio u soo gudbiso, waxaad u xaq-riixi kartaa dooro View Detail. Markaas xaalkaa macluumaadka ku saabsan maqal ah ee khaanadda saxda ah.
Ma sugi karaa in ay isku day ah? Tag ka hor si ay u download it on your computer oo laga yaabaa in aad ka hesho wax kadis ah oo dheeraad ah.